Midzimu Yadambura Mbereko Kutengesera Mapurisa Nyanga Dzenzou
12 Sep, 2021 | Posted By: Staff Reporter
MURUME wekuChipinge anoshanda semurindi kana kuti gadhi pakambani yeSouthern Company panzvimbo yemabhizimisi yeChecheche Growth Point akamiswa mudare achitarisana nemhosva yekutyora mutemo weParks and Wildlife Act mushure mekuwanikwa aine nyanga dzenzou.
Simon Tirivaviri (45) anoramba mhosva iyi paakamiswa pamberi pemutongi Mai Elizabeth Hanzi vedare reChipinge Magistrate Court.
Akanyimwa bhera uye nyaya yake ichaenderera mberi nekutongwa nguva pfupi inotevera.
Muchuchusi VaEdmore Mahlanganise vanoudza dare kuti nemusi wa30 Nyamavhuvhu gore rino, matikitivha akawana mashoko ekuti Tirivaviri aive nenyanga dzenzou.
“Matikitivha vakachaira Tirivaviri nhare vachiita sevaida kutenga nyanga dzenzou idzi ndokubva abvuma kuti vasangane panzvimbo yeMabhiza Business Centre.
“Tivaviri akaenda panzvimbo iyi ndokubva abudisa nyanga dzenzou idzo dzaive mubhegi hombe dema. Akati aidzitengesa US$1 100,” vanodaro VaMahlanganise.
Tirivaviri akabva asungwa mushure mekunge matikitivha aya azvizivisa kuti vaive mapurisa.